काठमाडौंमा डा. केसीमाथि प्रहरीको दुर्व्यवहार - Vishwanews.com
काठमाडौं । अनशनरत डा. गोविन्द केसीमाथि काठमाडौंमा प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको छ । उनी सोमबार जुम्लाबाट नेपालगञ्ज आएका थिए । नेपालगन्जबाट काठमाडौं आएका उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको हो । डा.केसी त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा अनसनका लागि जान चाहन्थे ।
तर, प्रहरीले उनलाई जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर लैजाने क्रममा दुर्व्यवहार गरेको छ । त्यसो त उनी ट्रमा सेन्टरमा समेत बस्न मानेनन् । त्यसपछि उनलाई अहिले शिक्षण अस्पतालमै लगिएको छ । केसीका सहयोगीका अनुसार केसीले ट्रमा सेन्टर नबस्ने अडान लिएपछि प्रशासनले शिक्षण अस्पताल लैजाने अनुमति दिएको हो ।
उनी शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका छन् । डा. केसीले सोही बेडबाट आमरण अनसन जारी राख्नेछन् । विभिन्न समसामयिक मागसहित चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनको माग राख्दै डा. केसी १९ औं चरणको अनसनमा छन् ।
डा. केसी भदौ २९ गते जुम्लामा अनशन बसेका थिए । उनीमाथि प्रहरीले गरेको दुव्र्यवहारको कांग्रेस नेता गगन थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेता कार्यक्रताले आलोचना गरेका छन् ।